यसकारण देउवा चुप - नेपालबहस
यसकारण देउवा चुप
| १३:४७:२८ मा प्रकाशित
२१ बैशाख, काठमाडौं । सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडी मानिएका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अंकगणित नपुगेरै मात्र सत्तासीन हुन अग्रसर नभएका हुन् त ? धेरैले बुझेको वा नबुझेको प्रश्न यही हो ।
विगतमा सत्ताको जोडघटाउमा देउवाका अगाडि अरु सबै कमजोर र फिक्का मानिन्थे । तर यसपटक भने देउवाले सत्ताको लागि खासै पहल गरेका छैनन् । किन भन्दा उनको जवाफ छ–खै त संख्या पुगेको ?
देउवालाई नजिकबाट चिन्नेहरुको विश्लेषण भने अलग छ । उनीहरुको बुझाइमा अहिले देउवा भारतलाई चिढाउन चाहँदैनन् । भारतीय संस्थापन पक्षको रुची यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निरन्तरतामा केन्द्रित रहेको देउवाको बुझाई हो । यस्तो बुझ्नका लागि उनले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षले देखाएको हर्कतलाई आधार मानेका छन् ।
महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई भन्दा एक कदम अगाडि छन् भारतीय संस्थापन पक्षसँग भन्ने बुुझाइ आम जनतामा पनि रहेको छ । त्यसैले देउवा पनि भारतीय चाहना विपरित सत्ता हत्याउने पक्षमा देखिएका छैनन् । यद्यपि यो कुरा उनले बोल्न भने मिलेको छैन । देउवाको चाहना भनेको आगामी भदौमा एकपटक जसरी भएपनि पार्टी सभापतिमा दोहाेरिने रहेको छ ।
त्यसका लागि पनि उनी भारतीय संस्थापन पक्षको सहयोग रहोस् भन्ने चाहन्छन् । सत्ता त ढिलो चाँडो आफ्नो हातमा आइहाल्ने उनको बुझाई हो । वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन मुश्किल हुने ठम्याई देउवाको छ ।
किनभने ओलीलाई अरु (जसपा) ले सहयोग गरे नै भने पनि पार्टी भित्रकै माधवकुमार नेपाल पक्षले असहयोग गर्नेमा देउवा ढुक्क देखिन्छन् । किनभने यस्तो आशयको अभिव्यक्ति स्वयं नेता नेपालले देउवालाई दिइसकेका छन् । त्यसैले ओलीको सत्ता अब लामो नरहनेमा उनी विश्वस्त देखिएका छन् ।ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि वैकल्पिक सरकार बन्न समेत नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन नसकेपछि स्वभाविक रुपमा ओलीले अल्पमतको सरकार बनाउने छन् । उक्त सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधान बमोजिम नै अर्ली इलेक्सनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने छ । अनि संभवतः मंसिरमा नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिने छ । त्यस्तो अवस्थामा देउवा पार्टीको सभापति पनि हुने र मंसिरमा चुनाव पनि जित्नेमा ढुक्क छन् ।
उनको विश्वास विभाजित कम्युनिष्ट भोटमा आधारित छ । तर यहाँ देउवा चुकेको देखिन्छ । किनभने यथास्थितिमा ओलीले चुनाव गराए भने उनी नै कम्युनिष्ट शक्तिको मूलधार हुने छन् । माधव नेपाल र माओवादी केन्द्रको हालत कमजोर हुने छ ।
०५६ सालमा एमालेबाट फुुटेर बनेको नेकपा मालेको जस्तो हालत माओवादी र माधव नेपाल पक्षको हुने छ । किनभने ओलीले शक्ति र पैसाको दुरुपयोग गरेर सबैको पत्ता साफ गर्ने छन् र एकल भोट प्राप्त गर्ने छन् । ओलीलाई कमजोर नबनाएसम्म नेपाली कांग्रेसले जित्ने कल्पना नगरे हुन्छ । देउवा यहाँ आएर नराम्रो मार खाने अवस्थामा छन् ।
किनभने माधव नेपाल र प्रचण्डहरु बलियो नभएसम्म ओली कमजोर हुने सवालै उठ्दैन । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले फेरि पनि साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर चुनाव नजित्लान भन्न सकिन्न । साथै, दक्षिणको समेत सहयोग र आशीर्वाद रह्यो भने त्यसको सम्भावना अझै बढेर जाने देखिन्छ ।
जसले गर्दा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनै पर्ने बाध्यता रहेको कतिपयको भनाई छ । तर देउवा भने यस्तो तर्क सुन्ने र मान्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । ओलीले लिने भनेको विश्वासको मत फेल भयो र देउवाको अग्रसरतामा नयाँ सरकार बनाउने पहल भएन भने हुने त मंसिरको चुनावको घोषणा नै हो । ओलीको चालामाला हेर्दा लाग्दैन उनले तत्कालै चुनाव गर्लान् । मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणा चाहिं गर्ने तर कोरोनालगायत विविध फण्डा उठाएर धकेल्ने काम भयो भने के होला ?
किनभने ओली सत्ताका लागि जस्तो सुकै काम र जोखिम मोल्छन् भन्ने विभिन्न घटनाक्रमले प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसको पछिल्लो श्रृँखला त गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पटाक्षेप भइसकेको छ ।
ओली पनि चाहन्छन् के भन्दा सकेसम्म विश्वासको मत लिने र बाँकी अवधि आनन्दले शासन चलाउने नसके मंसिरमा चुनाव घोषणाको वातावरण तयार गर्ने । ओलीको यो विश्वासको मत प्रकरणले नेपाली राजनीतिमा अर्काे पनि ठूलो प्रकरण निम्तिदैं छ–जसपा विभाजन ।
विश्वासको मत दिने र नदिने पक्षमा जसपा विभाजित छ । दुबै पक्षले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । त्यसैले बैशाख २७ गते जसपाको विवादले एउटा स्वरुप ग्रहण गर्ने छ – पार्टी एक मत दुई । ठाकुर र महतो ओली पक्षमा उपेन्द्र र डा. भट्टराई विपक्षमा ।
त्यसको परिणाम निश्चित छ– पार्टी विभाजन । ओलीले पोहोरदेखि नै चाहेको अभिष्ट अहिले आएर पूरा हुनेछ –जसपा विभाजन । यो प्रकरण यतिमा मात्रै टुंगिनेवाला छैन । ओलीले माधव नेपालहरुलाई सदाका लागि एमालेबाट लघार्ने मौका समेत पाउनेवाला छन् । उनको लामो समयको सपना पूरा गर्ने साइत जुरेको छ–वैशाख २७ गते ।
किनभने ओलीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा नेता नेपाल पक्ष छैन । चाहे फ्लोर क्रस गरेर होस् वा अनुपस्थित भएर होस् ओली सरकार ढाल्न उनीहरु दृढ देखिएका छन् । समस्या यतिमा सीमित छैन । ओलीलाई पदमुक्त गरेपनि वैकल्पिक सरकार बनेन भने उनी कहिलेसम्म सत्तामा रहने हुन् भन्न सकिन्न । किनभने उनलाई ठूलो भर राष्ट्रपतिको रहेको छ । जहिले जे चाह्यो त्यही गरिदिने राष्ट्रपतिले ओलीलाई बलियो बनाउन जस्तोसुकै असंवैधानिक काम गर्ने अवस्था रहेको छ ।
यो परिवेशलाई नेपाली कांग्रेसले सही र उपयुुक्त ढंगले ट्याकल गरेन भने भोलि आउन सक्ने भयावह अवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले देउवाले ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने प्रयास गरेनन् भने पछुताउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न कठिन छ ।
अब ओलीले विश्वासको मत लिनु अगावै अफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने गरी देउवाले प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै ओलीको भावी रणनीति बुझ्न सहज हुन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गर्ने चुनाव कुनै पनि अर्थमा निष्पक्ष हुनेवाला छैन । त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर देउवाले बैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास अहिल्यै गर्नैपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै माधव नेपाल पक्षले गरेको विद्रोह अर्थपूर्ण हुने छ । नत्र फेरि पनि देशले ओलीतन्त्रबाट मुक्ति पाउने देखिन्न ।
संसदबाट नीति कार्यक्रम पास नुहुने र वैकल्पिक सरकार पनि नबन्ने देखियो: भट्टराई ७ मिनेट पहिले
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण भवन निर्माणमा ढिलाई २ हप्ता पहिले
नेपाल लाइफको ‘नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना’ सार्वजनिक ३ दिन पहिले
प्रभु इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य समायोजन २ हप्ता पहिले
झापामा एक सातामै बढे चार गुणा संक्रमित २ हप्ता पहिले
मंगलबारबाट त्रिविका सबै तहका परीक्षा स्थगित ३ हप्ता पहिले
अमेरिकामा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ६५ हजार नाघ्यो १ वर्ष पहिले
पहिलोपटक जुगल हिमाल आरोहण खुल्ला २ वर्ष पहिले
सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न डा महतकाे आग्रह ११ महिना पहिले